Ilaha gaarsiinta cuntada ee loogu talagalay shakhsiyaadka khatarta ku jira inta lagu jiro COVID-19 - Cuntooyinka ku socda wheels
Kheyraadka gaarsiinta cuntada ee shakhsiyaadka halista ku jira inta lagu jiro COVID-19
Barnaamijka Cunnada ee Magaalooyinka Mataanaha ah ayaa leh habdhaqanka gaarsiinta la waafajiyay inta lagu jiro COVID-19 Faafida iyadoo la ogyahay in dad badan oo aan u adeegno ay halis sare ugu jiraan dhibaatooyinka fayraska. Waxaan sidoo kale ognahay in waayeel badan iyo dadka naafada ah ay ku tiirsan yihiin adeegyada sida Meals on Wheels xitaa si aad u xoogan hada ka bixida guriga si aad u hesho raashin ay la timaado khatar sare oo soo-gaadhis ah
Cuntada Lugaha lagu kaydiyo keli kuma aha la qabsiga dhaqamada si cunno loogu helo dadka u baahan inta cudurku socdo. Kheyraadka kale ee gargaarka gaajada iyo hay'adaha sidoo kale waxay habeeyeen habka ay u ganacsadaan si ay uga caawiyaan ilaalinta dadka ay u adeegaan.
Khaanadaha cuntada ee wareegaya wareega iyo qaadista
Khaanadaha cuntada ee deegaanka ayaa kor u qaaday howlaha shelf shelf halka qaarna ay sidoo kale u fidiyaan adeegyo gaarsiin xubnaha bulshada nugul. Qaar badan oo ka mid ah khaanadaha cuntada ayaa sidoo kale la qabsaday qaabab soo qaad ah si loo hubiyo in shaqsiyaadka aysan u baahnayn inay galaan dhismaha. Waxaad ka heli kartaa shelf cuntada kuugu dhow halkan oo ay la socdaan macluumaadka xiriirka.
SNAP / EBT ee alaabta la soo gaarsiiyo
Kaqeybgalayaasha Barnaamijka Caawinta Nafaqada Dheeriga ah (SNAP) ama Barnaamijka Maalgalinta Qoyska ee Minnesota (MFIP) ayaa hada isticmaali kara kaarkooda EBT si ay uga iibsadaan raashinka qadka internetka ee Walmart iyo Amazon. Waxaad u isticmaali kartaa kaarkaaga EBT inaad kubixiso bixinta guriga marka adeeggaas lagu bixiyo. Waxaad ka baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan iibsashada cuntada khadka tooska ah iyadoo la adeegsanayo dheefaha EBT halkan.
Intaas waxaa sii dheer, Caawinta Albaabkaaga waa mid aan faa'iido doon ahayn oo bixisa adeeg gaarsiinta cuntada dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah waxayna sidoo kale aqbashaa gargaarka SNAP. Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan adeegyadooda halkan.
Barnaamijyada cuntada bulshada waxay sidoo kale la qabsadeen inay bixiyaan cunnooyinka la iska tago. Loaves iyo Kalluunku waxay martigeliyaan goobaha laga cunteeyo ee metro-ga oo dhan ee bixiya cuntada la iska tago. Eeg meesha kuugu dhow ee laga cunteeyo bulshada.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid aad ugu jirtaan halista sare ee dhibaatooyinka ka yimaada COVID-19 oo aad ka faa'iideysan kartaan bixinta Cunnooyinka Lugaha, halkan waad iska qori kartaa.
Juun 24, 2020